के भयो अनिल कपुरलाई ! जसको उपचारका लागि उनि जर्मन जादै छन् – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodके भयो अनिल कपुरलाई ! जसको उपचारका लागि उनि जर्मन जादै छन्
February 3, 2019 Tulasa Karki Bollywood, News 0
बलिउडका सदा बाहार अभिनेता अनिल कपुर अहिले ६२ वर्षका छन् ६२ वर्ष उमेर पूगेता पनि उनि जवानीमा सरह उतिकै फिट देखिने गर्छन । यसै क्रममा आजकाल उनि दायाँ काँधमा क्ल्याल्सिफिकेशनको समस्याबाट गुज्रिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । जसको उपचारको लागी अप्रिलमा उनि जर्मनी जादैछन ।
एक कार्यक्रममा बोल्दै उनि क्याल्सिफिकेशनका कारण उनको दायाँ काँधका केही तन्तुमा असर परेको र अब उपचारको लागि उन्नी जर्मनी जान लागेको बताएका छन ।